Ota Wadhi Tsika Yeruzivo Ruzivo Pepa "ART nyuchi HIVE" vol.1 + nyuchi! | Ota Ward Tsika Yokusimudzira Sangano
Yakabudiswa Gumiguru 2019, 10
vol.1 Chinyorwa chekutanga
Art ndeyekugara semusoro wenyaya Munzanga umo munhu wese ari "muimbi"
VaTanaka vakabatanidzwa mukusimudzira nharaunda, bhizinesi retsika, uye basa rezvemagariro kubvira pavakajoinha kambani yemhuri yekuvaka pamwe nekambani yekuvaka mukati memakore ekuma2004 mukati ma20.Mabasa akadai seprojekti yekupenda nzvimbo dzeveruzhinji dzakadai zviteshi uye mapaki munzvimbo yeTamagawa nehunyanzvi hwazvino, manejimendi enharaunda kuburikidza nekushandisa nzira uye nzvimbo dzeveruzhinji munzvimbo yeKomat kumabvazuva yekubuda, uye kuyedza kuendesa hunyanzvi kuvana mumakore achangopfuura. Kune nzvimbo dzakawanda dzekushanyira.
"Kutaura nezvezvirongwa zvine chekuita nehunyanzvi, basa rangu kuve mugadziri. Vabatsiri inyanzvi mumhando dzakasiyana senge vatungamiriri vezvehunyanzvi, maartist, uye vagadziri. Kubva pakuronga, mari, kutaurirana kwakasiyana siyana, nezvimwe, manejimendi ekufambira mberi, hukama hweveruzhinji, nezvimwewo zvinobatanidzwa mu "
VaTanaka, avo pakutanga vaishuvira masango ehunyanzvi (* XNUMX) uye dhizaini, vakatanga kushanda nevanyori vanoshanda kumberi kwekutanga kekutanga vachangopinda kambani.Kunyangwe aine ruzivo rwekumashure, haana kumbofunga kuti achazobatanidzwa munyika.
"Chaizvoizvo kugara navo mumunda, takatarisana nenzanga nevanhu, uye tichifunga pamwe chete. Ndakafadzwa nemufaro wechokwadi wekukudziridza sebasa pamberi pangu. Ichi chichiri chimwe chete. Vanhu pakutanga. Pane hapana chakadai se "fomu rakapedzwa" mubasa revanhu, saka chakakosha muchirongwa chero chipi zvacho kuzviisa mumamiriro ezvinhu uye kubatanidzwa. Chii chinoitika pane chinhu chega, asi chii kuburikidza nacho? "ndeyenyika yose mukunzwa nekufunga. Ndinofunga rudzi urwu rwekubatanidzwa rwuri padyo nemanzwiro ekumhanyisa rudzi rwemunharaunda."
Kuvaka Atelier "HUNCH"
Kuna VaTanaka, avo parizvino vari kuita zviitiko zvakasiyana mukufananidza, simba rekutyaira nderekuti "iro razvino" dhorobha "nehupenyu hwevanhu huri kunanga munzira yemufaro."
"Kubvira pandakatanga kushanda pabasa reruzhinji, mubvunzo wekuti veruzhinji ndewani uye hunyanzvi ndeupi hauna kumbondisiya. Semuenzaniso, ini ndiri kuitawo manejimendi munzvimbo yeKamata East Exit.," Street "yaifanira kunge iri nzvimbo yekuti vanhu vagare, asi ndisati ndazviziva, yakava nzvimbo yekutakura chete, uye inotarisirwa nemapurisa nehurumende. Nzvimbo yakadaro inonzi" nzvimbo yeruzhinji ". Asi ichokwadi here pachena? Pakutanga, nzvimbo iyo vanhu vanoramba vachibvunza mibvunzo yakadai uye kutsanangura patsva inogona kunge iri nzvimbo yeruzhinji. "
Mupendi wenguva pfupi
"Guta" iyo inzvimbo yeruzhinji uye nzvimbo yehupenyu hwevanhu.VaTanaka vakataura nezve hukama pakati pevanhu ne "mataundi" uye shanduko yavo, vachipa muenzaniso kubva kutsika dzakakurumbira.
"Ini ndinodawo mimhanzi, asi pane imwe nguva ndakaona kuti kuvapo kwe" taundi "kwakanyangarika kubva kuimba dzerwiyo rwekufungidzira. Fungidzira. MuJapan, kusvika kuma1990, raitungamira basa renziyo dzepop raive. Yaive" taundi ". Nyaya ye "Ini newe" murwiyo rwerudo yaivewo nyaya yeguta. Zvinoreva kuti paive nemamwe akawanda akafanana "ini" mutaundi. Ini ndinofunga kuti dhorobha rinongova boka rechimwe nechimwe chezvinhu izvi. mazwi, vanhu vane hukama kune mumwe nemumwe semutumbi mukuru, zvisinei nekuti vane hukama navo kana kwete. Inodaidzwa kuti "Ring World (* 2)" .Muma 90's, iro guta rakava kumashure kwedu, ndiko kuti Saka kutaura, kuvapo kweguta kwakava "chinhu" kwatiri. Zvisinei, mushure memakore epakati pema'90s, kunyangwe chinhu chakanyangarika, uye chinhu chekucherechedza chakave "chakazvimirira".
Tamagawa Art Line Project "Tokyu Tamagawa Line Numabe Chiteshi"
* Taura panguva iyoyo.Parizvino kwete.
VaTanaka vanofunga kuti chiitiko chakadai mucherechedzo wekuti "vanhu havachagona kuve nechekuita mutown."Mumazera azvino apo hupfumi hwemabhizimusi epamberi hwave hwemberi, vanhu vave kukwanisa kutungamira hupenyu hwakachengeteka, hwakagadzikana uye hwakareruka hwemaguta uye hupenyu hwavo hwakawedzerwa, asi mudunhu re "ringi" renharaunda rakatemwa ". Kana zviripo.
"Zvino, nzvimbo iyo vanhu vanogadzira zvinhu, chinova chiitiko chevanhu, iri kutsakatika kubva mutaundi nehupenyu. Hupenyu hwevanhu vasingaverengeki hunove nyaya yeguta, uye nyaya yeguta inopindirana nehupenyu hwevanhu zvakare- Ndiri nzvimbo yeruzhinji Asi ndinotarisira kuzowana nyika zvakare.
* 1 Pfungwa yechiitiko cheunyanzvi uye fomu.Zvinoreva hunyanzvi hwakasiyana nehunyanzvi hwakakurumbira.
* 2 Pfungwa yakasimudzirwa nenyanzvi yezvipenyu yeGerman Jacob Johann von Yukscur.Zvese zvipenyu hazvirarame munyika ine chinangwa, asi mu "nyika yezvakatipoteredza" iyo inogadzira pasi pasi nemifungo uye hunhu hwerudzi rumwe nerumwe. (Yukusukuru / Kriszat, rakashandurwa naToshitaka Hidaka et al., "Nyika Yakaonekwa Kubva kuZvinhu Zvakararama", 2005, Iwanami Bunko)
Art nzvimbo + nyuchi!
"Hiroshi Senju's Art muHaneda Airport"
Kubatana pakati peHaneda Airport nehunyanzvi hwaSenju
Hiroshi Senju hunyanzvi hunoshanda hwakapararira vakatenderedza Haneda Airport, iyo gedhi rekudenga kuOta Ward.
Kubatana pakati peHaneda Airport nehunyanzvi hwaSenju kwakatanga muna 1, pakavhurwa Terminal 1993.
Pakutanga kwekuvhurwa kwemuseum, kwaive nehurongwa hwekuratidzira mabasa ehunyanzvi (zvivezwa, zvinhu, pendi, nezvimwewo) zvevadiki vanouya-uye-vanouya maartist mune terminal, uye mumwe weavo vaiuya-uye-vaiuya maartist aive VaSenju.Mushure meizvozvo, akave anozivikanwa pasirese, sekupa zvipo uye kuwana mubairo wekutanga wekuremekedza seMabvazuva muchikamu chekupenda cheVenice Biennale muna 1995, uye muna 2004, akavaka Terminal 2. Panguva iyoyo, VaSenju vachashanda pabasa senzvimbo yekumugamuchira semugadziri wehunyanzvi uye ndokutumira kune nyika.Mushure meizvozvo, akashanda pakuvhurwa kwetemu yepasi rose muna 2010, uye paHaneda Airport, unogona kunakidzwa nemabasa aVaSenju kwete kwete chete nendege dzekunze asiwo nendege dzenyika dzese.
Sezvo pfungwa yeTerminal 2 iri "gungwa", iro basa rinonyanya kusanganisira "bhuruu".Pfungwa dzaSenju uye meseji zvinosanganisirwa mune yega yega pendi, iyo inoratidza kufara kwerwendo vasati vaenda uye zororo mushure mesvika.
Pfungwa dzaVaSenju vari kubasa
Kubhururuka mudenga kwave kuri kurota kwevanhu kubva panguva dzekare.Ndege izvozvi dzinobhururuka zvakajairika, asi nemapapiro mahombe kumusana kwavo, takabatwa nepfungwa dzemadzitateguru edu ari kure ndokudhirowa mimwe mifananidzo yedenga nezvakasikwa panhandare iyi.
Ndakazviita pamwe nekufungidzira kwevanhu vakapenda iyo Paleolithic mapako emifananidzo akanzwa kubatana neyakavhurika kune mhuka dzaive nenyanga dzakaita semwedzi nenyanga pamiviri yavo.
Vanhu vakanzwa zvakavanzika uye vakakudziridza fungidziro yavo munyeredzi dzinopenya kubva kure kure, asi ini zvakare ndaida kutora chimwe chinhu senge iwo mafungiro.
"Mangwanani egungwa" "Husiku hwegungwa"
Ndainzwa kuti ichi chishamiso muchadenga, ndikachidhonza.
Hiroshi Senju "Mangwanani Lakeside" Domestic Terminal 2
Leonardo da Vinci, uyo aida kubhururuka mudenga, anoti, "Maonero ese ari kure anouya nebhuruu."Nezvo izvo mupfungwa, ini ndakagadzira basa rakavakirwa pabhuruu.
Zvakare munzvimbo yakadaro! ??
Unyanzvi hwaSenju hwakapararira pane dzese nendege nendege.
Ndege dzemumba dziri munzvimbo yaunogona kudziwona pasina kukwira ndege.Imwe nzira yekunakidzwa nayo kushanyira nhandare uchitsvaga kuti basa riripi.Munzvimbo dzausingakwanise kuzviwana kunze kwekunge iwe watarisa kumusoro, kana munzvimbo dzakadai! ??Kune zvakare mabasa uye tsananguro dzakaiswa munzvimbo!
Uye zvakare, mabasa epasi rese epamberi achagadzwa munzvimbo yekuongorora, saka ndokumbira utarise mabasa kana iwe uine mukana wekupinda kana kubuda munyika kubva kuHaneda Airport.
Mabasa eKota 2 anounzwawo pawebhusaiti yeHaneda Airport.
Dzvanya apa kuti uwane ruzivo
Munhu anotungamira paHaneda Airport akati, "Muna Kurume 2020, Terminal 3 ichava chiteshi chengarava dzekunze nedzenyika dzepasi rose, asi semusuwo wedenga reJapan, hunyanzvi hweJapan kwete chete veJapan asiwo vevatorwa. Ndinovimba kuti ucha nakidzwa nebasa uye unzwe pfungwa neshoko raVaSenju. "
Ndokumbira kuti ushanyire nzvimbo yehunyanzvi paHaneda Airport.